Ingeniso yeselula yeNetflix inyuka nge-233% | Iindaba zeGajethi
UJose Alfocea | | Ukusasaza
Iqonga levidiyo yokusasaza iNetflix iyaqhubeka nokudibanisa imeko yayo yecandelo kwicandelo. Ukuba kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele lonto INetflix yaphula iirekhodi ezophula isithintelo sababhalisi abazizigidi ezili-XNUMX kwihlabathi jikelele emva kokudibanisa 5,2 yezigidi zabasebenzisi abatsha Kwikota yokugqibela, ngoku kuvela ukuba ixesha eliqala ngo-Epreli ukuya kuJuni 2017 likwayirekhodi ngokwengeniso yezoqoqosho kwisicelo sayo esiphathwayo.
Ngokwezigqibo zokugqibela ingxelo ipapashwe yinkampani ye-analytics firm Sensor Tower, kwikota yesibini ye-2017, Isoftware yeNetflix ye-iOS ithumele ukukhula kweepesenti ezingama-233 efikelela kwizigidi ezili-153 zeedola, ezimele izigidi ezingama-46 zeedola ngaphezulu kwangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, amanani ahambelana nokuhluma okukhoyo kwinani lababhalisi.
1 INetflix iyakhula, iyakhula, iyakhula ...
2 Kutheni le nto ukukhula kubukhali kumaqonga ahambayo
3 Isitshixo: iigridi ezinomxholo ohlukeneyo kunye nobuninzi
INetflix iyakhula, iyakhula, iyakhula ...
INetflix iyayibetha, kwaye uyazisola ngentetho, kodwa iyinyani. Iphule iirekhodi zababhalisi ezidlula konke obekulindelwe kwaye ngoku, usetyenziso lwayo lweselfowuni lwamava e-iOS ngama-233% yokukhula kwengeniso kwaye iba yiyo owona mthombo wakho wengeniso. Kodwa, kunokubangelwa yintoni ukukhula okunje?
Isicelo seNetflix sibone ingeniso ikhula kuzo zombini isicelo sayo se-iOS kunye ne-Android, ukukhula kwinqanaba lomvuzo elibeka iNetflix kakuhle ngaphambi kokukhula komndilili wazo zombini iivenkile zeapp Iiselfowuni ezimi ngoku kuma-56 eepesenti. Ngamanye amazwi, Ukukhula kwengeniso yeNetflix Ukuza kwizixhobo zefowuni ze-Android kunye ne-iOS akunxibelelaniswa kuphela nokukhula okuqhubekayo kwesicelo sendalo ngokwaso kunye namashishini ahambelana nayo, kodwa ibaluleke ngokukodwa kumandla eNetflix okongeza ababhalisile abatsha.
Kutheni le nto ukukhula kubukhali kumaqonga ahambayo
Njengoko besikhumbula ekuqaleni, kwiveki ephelileyo inkonzo yokusasaza inike ingxelo yokuba yongeze ababhalisile abazizigidi ezi-5,2 kwikota yesibini yonyaka, ngaphezulu kwesigidi se-3,2 esasiqikelelwe. Kuzo zonke, ngaphezulu kwezigidi ezine (ezine kwabahlanu, malunga neepesenti ezingama-80) zivela kwiimarike zamanye amazwe, ezinokuthi zincede ekucaciseni ukonyuka okubukhali kwengeniso kwiVenkile yeApple. Kwaye kunjalo Abasebenzisi abatsha beNetflix bahlala bebhalisa ngeefowuni zabo kunye nokwenza intlawulo yobulungu njengokuthenga ngaphakathi kweapp, kuba bafumana izibonelelo ezifanayo kwaye kulula ngakumbi kwaye zikhawuleza.
Kumhlaba jikelele (amaqonga eselfowuni, iikhompyuter zekhompyuter kunye neelaptop, iibhokisi ezisetiweyo, njlnjl.), Ingeniso yeNetflix yekota yesibini inyuke ngeepesenti ezingama-32, elingana ne-2.790 yezigidigidi zeedola. Ngexesha lekota engaphambili, ingeniso inyuke ngama-36%, yafikelela kwi- $ 2.480 yezigidigidi.
Ukusuka koku kunokuchazwa, njengoko kuchaziwe kwingxelo yeSensor Tower, ukuba ngokukhula kwe-233%, Ingeniso evela kumaqonga eselfowuni aphezulu kakhulu kunalawo angaqhelekanga.
Kwelinye icala, iNetflix ibonakalise ngokucacileyo eyona mbangi yayo inkulu namhlanje, uHulu, onengeniso evela kwiivenkile zesoftware ehambileyo ibone ukukhula kweepesenti ezingama-22 kwikota yesibini.
Isitshixo: iigridi ezinomxholo ohlukeneyo kunye nobuninzi
Njengoko inkampani sele ikhombisile xa ikhupha iziphumo zayo zemali kwiveki ephelileyo, Isitshixo sokukhula kwayo silele kumxholo wokuqala, into ethi ityalwe yiNetflix unyaka nonyaka. Kwi-2017, sele ityale i-6.000 yezigidigidi kumxholo wokuqala, kubandakanya neefilimu ezingamashumi amane.
Kule meko, iNetflix yakhupha umngeni kumzi mveliso wefilimu waseHollywood esithi ngoku iceba ukuguqula ishishini lomdlalo bhanyabhanya kanye njengoko sele kwenziwe kwishishini likamabonwakude. Kule meko, inkampani ithe "… njengoko sitshintsha kwaye sibuyisela ishishini likamabonakude ngokubeka abathengi phambili kunye nokwenza lula ukufikelela kumxholo, sikholelwa ukuba umabonwakude we-Intanethi ngokufanayo angavuselela ishishini lemiboniso bhanyabhanya". Ngaba iya kuphumelela?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukusasaza » Ingeniso yeselula yeNetflix inyuka ngama-233%